EEG SAWIRKA: Cristiano Ronaldo oo xalay ku kacay fal aad u xun!! – Gool FM
Man United, Tottenham & Chelsea oo bartilmaameedsanaya xiddig ka ciyaara horyaalka Premier League
Horudhac: Manchester United vs Paris Saint-Germain… (Red Devils oo hal dhibic raadinaysa & PSG oo aar-gudasho u baahan)
EEG SAWIRKA: Cristiano Ronaldo oo xalay ku kacay fal aad u xun!!
Byare November 3, 2016
(Madrid) 03 Nof 2016. Real Madrid ayaa xalay bar-baro lama filaan ah la gashay kooxda Legia Warsaw tartanka Champions League kulan lagu sheegay kii ugu ximaa taariikhda ay ciayarto Los Blancos.
Cristiano Ronaldo oo xilli ciyaareedkan cusuba ku jiray qaab ciyaareed aan qurxooneyn ayaa xalay xaalka ku sii cuslaaday markii uu fal aan qumaneyn ku kacay kaddib markii uu gool dhalin waayay markale.
Waxaa la soo bandhigay sawir xiddiga ugu cad cad sanadan abaal marinta Ballon d’Or oo si kas ah ugu istaagaya daafaca kooxda ka dhisan caasimada Poland ninka lagu magacaabo Michal Pazdan dhammaadkii kulanka.
Sida uu sheegayo warsidaha Catalan dhacdadan ayaa soo ifbaxday daqiiqadii 90-aad mar ay Real Madrid isku dayayeen inay helaan goolka guusha.
Goolhayaha naadiga Legia Warsaw Arkadiusz Malarz ayaa la arkayay isagoo garsooraha ciyaarta uga cabanaya falka uu Ronaldo kula kacay saaxiibkii balse garsoore Pavel Kralovec ayaan wax ganaax ah ku ridin Ronaldo.
Tababaraha Borussia Dortmund oo diiday inuu ka hadlo sababihii uu u ganaaxay Aubameyang
Gerard Pique oo doonaya inuu ciyaaro kulanka Sevilla